Raw Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9) Ndị na-emepụta - Phcoker
Raw Coluracetam ntụ ntụ bụ onye ọhụrụ na nke pụrụ iche nke otu racetam nke sịntetik nootropics. Si na-developed ..
Fọl Coluracetam uzuzu (135463-81-9) video
Ụkwụ Coluracetam nke ụkọ (MKC-231) bụ ọgwụ ọgwụ racetam nke sịntetị bụ nke a na-ekwu na ọ bụ ihe na-enweghị atụ. O nweghị nnukwu ihe àmà nke na - achọpụta ya, ma usoro nke ihe (ma ọ bụ usoro) dị iche site na mpaghara ndị ọzọ racetam dị ka Piracetam ma ọ bụ Aniracetam.
Ụkwụ Coluracetam dị elu na-egosipụta ka ọ na-emekọrịta na usoro a maara dị ka ebido ịchọta ịchọta afụcha (HACU maka mkpụmkpụ), nke bụ nkwụsịtụ nke na-agbatị ọnụ maka ịbịpụta ihe na ntinye maka ntinye aka n'ime acetylcholine neurotransmitter. Ịbawanye ọnụego HACU na-egosi ka ịmalite ọrụ nke eriri cholinergic, ya mere, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ a chọrọ maka mmelite nke uche.
Ntuchi Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9) Smmezi
Product Name Raw Coluracetam ntụ ntụ
Chemical Aha N-(2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
molekụla Fnhazi C19H23N3O3
molekụla Wasatọ 389.4
Nkịtị Monoisotopic 341.174 g / mol
Nkịtị ziri 341.174 g / mol
Agba White to Off-White Cyrstalline siri ike
Coluracetam Antinye Ụkwụ Coluracetam nke ụkọ (MKC-231) bụ ọgwụ ọgwụ racetam nke sịntetị bụ nke a na-ekwu na ọ bụ ihe na-enweghị atụ.
Raw Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9) Nkọwa
Coluracetam (MKC-231) bụ ọgwụ racetam sịntetik a na-ekwu na ọ bụ ogige nootropic. Nnyocha na-egosi na ọ nwere ike ime ka cognition na ncheta dịkwuo mma, ndị ọrụ na-ekwukwa na ọ na-emekwa ka itinye uche, mgbado, na ọhụụ dịkwuo mma.
Coluracetam ntụ ntụ na-eme ihe dị ka nkwalite ịchọta nke choline nke na-emetụta ọrụ ncheta na-emetụ aka. Ọ na-eme ka ọ dịkwuo mma ịchọta ihe dị elu, ọganihu na-arịwanye elu nke neurotransmitter acetylcholine site na ịnyekwuo aha nke ọ na-eme. Ebe ọ bụ na acetylcholine bụ neurotransmitter nke nwere njikọ chiri anya na nchekwa na cognition, a kwenyere na ọrụ a bụ isi iyi nke ọrụ coluracetam.
Coluracetam kachasị dị mkpa ma chọọ obere mkpụrụ karịa akụrụngwa ndị ọzọ racetam nootropics. Ọ na-eme ngwa ngwa, na-eru ogo dị na plasma n'ime minit 30 nke ingestion, ma n'ime awa atọ, ọ na-adaba.
Raw Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9) Ime ihe
Coluracetam na-eme ka nkwalite choline dị elu (HACU), nke bụ usoro nkwụsị nke usoro acetylcholine (ACh). Nnyocha egosiwo ntụ ntụ coluracetam iji melite mmerụ mmụta na otu mkpụrụ ọgwụ e nyere ụmụ oke nke ekpughere neurotoxins cholinergic. Nnyocha ndị na-esochi egosiwo na ọ nwere ike ibute mmetụta nchoputa na-adịgide adịgide na cholinergic neurotoxin na-emeso ya site na ịgbanwe usoro nchịkwa choline transporter.
uru nke Raw Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9)
Coluracetam nwere ike imezi ebe nchekwa na ikike ịmụta
Coluracetam nwere ike inyere aka n'ịgwọ ọgwụ ịda mbà n'obi
Coluracetam nwere ike belata nchegbu na nchekasị
Coluracetam nwere ike ịkwado neurogenesis (mmụba nke mkpụrụ ndụ akwara)
Coluracetam nwere ike inyere aka n'ịgwọ ọrịa
Coluracetam nwere ike ime ka anya gị dịkwuo mma
Na-atụ aro Raw Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9) Ọgwụgwọ
Ihe ka ukwuu n'ime nnyocha ndị e mere na coluracetam mere na ụmụ anụmanụ karịa ụmụ mmadụ, n'ihi ya, ọ dịghị usoro nduzi nduzi ọ bụla a nakweere. A na-akọwakarị ụdị usoro ọgwụgwọ dịka 5-20 mg. Ndị ọrụ nke coluracetam ekwuwo ọtụtụ usoro a na-eji edozi ọnụ ma jiri nwayọọ.
Nzaghachi onye ọrụ ekwuola na ndidi na coluracetam ntụ ntụ nwere ike ịmalite ngwa ngwa. Dị ka ọgwụ niile, ọkachasị nootropics, ọ kachasị mma ịmalite na obere obere wee jiri nwayọ nwayọ nwayọ ka ahụ gị na-eme ma gbanwee ọgwụ ahụ. Coluracetam anaghị egbu egbu ma na-ahụta ka edobere ya nke ọma.
mmetụta of Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9)
Coluracetam uzuzu abụghị nke na-egbu egbu. Ya mere a na-ele ya anya nke ọma ma dị mma.
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ oge mbụ nke Coluracetam na-akọ ike ọgwụgwụ bụ nke na-emekarị site n'ịmalite na oke dose.
Nyochaa maka uru ahụike dị na Nootropic Coluracetam ọhụụ dị na Brain